Ewebata Moto Z Force, nke kachasị ike nke usoro Z ọhụụ | Gam akporosis
Lenovo ọkwa na Moto Z Force, ike kacha ike nke Z usoro
Bọchị dị mma maka Lenovo na ngosi nke ngwaọrụ Tango, nke anyị maara site na Phab 2 Pro, na mbata nke Moto Z, nke bụ ihe mbụ na-abịa dochie Moto X. Otu ụbọchị na San Francisco maka ihe omume ahụ nke ọbụla Google nọ na-ebupụta ozi ọma banyere Project Tango nke rutere maapụ ebe mechiri emechi.
O nwekwara nwere ya oge iji chee na Moto Z Force, na ike kachasị ike na usoro Z ọhụrụ si Motorola, nke ahụ nwekwara nkọwa dị oke elu iji gbalịa iti ndị ọzọ ọnụ na ọnụahịa ndị ahụ. Ekwentị na-agbachitere ahịrị na imewe, ígwè ahụ nke ghọọlarị omume na oghere dị okirikiri maka oghere nke na-ewere ọnọdụ etiti na azụ.
Ọnụ na-akwado a adịchaghị imecha na nke ahụ na-eduga igwe ahụ na ihe ngosi pụrụ iche na nke zuru ezu nke ihe mmetụta 21 megapixel na laser na-elekwasị anya na azụ na-apụta karịa ihe niile. Ọ bụrụ na ewere ohere ahụ n'ụzọ ahụ, ọ bụ n'ihi na ama ama a ga-eme nke ọma na foto.
Anyị nwekwara mgbawa Qualcomm Snapdragon 820, ya 4 GB nke Ram, nhọrọ nchekwa abụọ na 32 / 64GB na ụgwọ ngwa ngwa maka ikike batrị ruru 3.500 mAh.
Anyị nwere ike ikwu maka igwefoto o nwere 21 megapixels nwere igwe ihe eji eme ihe, laser autofocus, f / 1.8 aperture, dual LED flash, 1080p ndekọ na a kacha nke 60 fps na 4K na 30 Fps. Na n'ihu ruo 5 MP na f / 2.2 oghere ya na oghere nwere oghere sara mbara, zuru oke maka ndị hụrụ onwe ha n'anya.
Nkọwapụta Moto Z Force
Qualcomm Snapdragon 820 mgbawa kụrụ na 2.2 GHz
5,5 ″ AMOLED 2K mkpebi ihuenyo
32/64 GB ebe nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa site na microSD
Igwefoto 21 MP n'azụ na mgbado laser
5MP ihu igwefoto
2.600 mAh batrị
Ese Typedị USB-C ga-enyere anyị aka ijikọ ekweisi site na nkwụnye nkwụnye nke na-abịa na ekwentị maka minijack. N'ihi ya, ọ ga-abụ 2-na-otu maka ịkwanye na ekweisi. Anyị amaghị nkọwa banyere ọnụahịa ya, mana a na-eche na site na Septemba anyị ga-amata nnweta ya zuru ụwa ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Lenovo » Lenovo ọkwa na Moto Z Force, ike kacha ike nke Z usoro
Hugo Marquez dijo
Na mkpụrụ ego zọọ na azụ ???
Igwefoto na-apụ apụ apụchaghị mma ọzọ.
Zaghachi Hugo Marques
Eziokwu bu na obu ede! LOL. Echere m na ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na foto ahụ dị mma.
Uche Chukwu dijo
Echere m na ọ bụrụ na ihe nlere a ga-abịakwa na ihuenyo a na-apụghị ịgbagha agbagha nke onye bu ya ụzọ X nwere ...
WhatsApp na-agbakwunye ikike ikwupụta ozi onye ọrụ na ụdị beta
Lenovo weputara Moto Z nwere 5,5 “AMOLED Quad HD screen, Snapdragon 820 na 4GB RAM.